Apple inopa Procreate kubva kuApple Store app | IPhone nhau
Apple inopa Procreate kubva kuApple Store app. Tinokuratidza maitiro ekuodhaunira
Yakanga iri nguva yakareba kubvira apo vanhu veCupertino vakatipa chikumbiro yemahara kubva kuApple Store app, asi isu tatova nekusimudzirwa kutsva. Kweasingasviki maawa makumi maviri nemana, tinogona kudhawunirodha pasina kubhadhara peni Procreate, chishandiso chinotibvumidza kudhirowa tichishandisa maturusi akasiyana (anoenderana ne3D Kubata uye kuteedzera kunenge kuri mukobvu kana kupenya zvichienderana nedzvinyiriro ratinoita) pane kana tichida kuridhawunirodha kubva kuApp Store tisina kutora mukana wekusimudzira kwazvino tichafanira kubhadhara € 5.99,
Zvinotaridza zvakakosha kwandiri kuti nditaure kakapetwa kane chiuru kuti kurodha pasi iko kushandiswa kweizvi uye kumwe kukwidziridzwa kwakafanana tichafanira kuzviita kubva kuApple Store app (chitoro chehardware). Haizove nguva yekutanga kuti mushandisi anyunyute achiti anoda kurodha kunyorera kwekusimudzira uku uye hakuna mahara, asi imhaka yekuti anoedza kuikanda kubva ku App Store (chitoro cheapp). Iyi Apple kusimudzira ndeyekuti isu tive neApple Chitoro chishandiso chakaiswa uye nekuivhura nguva nenguva.
Dhawunirodha iyo Procreate app mahara
Isu tinovhura iyo Apple Chitoro application. Zvekare zvakare, zvakakosha kuyeuka kuti ndiko kunyorera kubva kuApple Chitoro (kwavanotengesa Hardware) uye kwete iyo App Store (application chitoro). Kuti udzivise chero nyonganiso, iko kunyorera zvinotevera
Kubva pane iyo tebhu Yakaiswa, tinotsvedza kudzamara taona icon yekushandisa.
Takatamba pa Dhawunirodha Zvibudirire mahara *.
Iye zvino tinobata pazasi, pane chena chinyorwa pane yakasvibira kumashure iyo inoti Free download.
Muhwindo re-pop-up, tinoshandisa Enderera.
Tevere, isu tinoisa password yeApple ID yedu.
Muhwindo rinotevera, tinoshandisa exchange.
Chekupedzisira, kuti tibude tinobata OK.
Kana iwe waita zvese mushe, unogona ikozvino kunakidzwa nePrerere pane yako iOS chishandiso. Iwe unogona kutiudza izvo iwe zvaunofunga nezve iko kunyorera kana, zvirinani zvakadaro, wedzera zvinongedzo kune zvako zvisikwa 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inopa Procreate kubva kuApple Store app. Tinokuratidza maitiro ekuodhaunira
Iyo vhezheni yavanopa ndeye muhomwe imwe, inoshanda chete kune iPhone kana iPod rouch, kwete yePadad.
Pindura kuna Gesus
Manuel Leiton akadaro
Kutenda kuzhinji. Ndine iyo iPad vhezheni uye iri chaiyo yekupfuura.
Pindura kuna Manuel Leiton
Chipo ichi chakapera musi wa28.
Ini ndinosvika pasarudzo yekuenderera, ndepapi pandiri kufanirwa kuisa password asi hapana chinobuda, nei zvakadaro?
Google Dudziro inovandudzwa nekuwedzera mitauro mitsva